20 Wakiilada Ciyaaraha Ugu Lacagta Badan | Faallooyinka ugu Fiican | Talooyin
Bogga ugu weyn 20 Wakiilada Ciyaaraha Ugu Lacagta Badan | Faallooyinka ugu Fiican
Tirooyinka isboortiga (cayaartoyda iyo tababarayaasha) ma noqon karaan cayaartooy/tababare oo weli keligii maareeye ayay ahaan karaan. Sidaa darteed, waxay walwalladan oo dhan uga tagaan maareeyaha isboortiga si uu u maareeyo.
Ciyaartooyga aad ugu jeceshahay wuxuu leeyahay qof daaha gadaashiisa ka dhigaya shaqada mid sahlan. Markaa, wakiilada isboortigu waxay mudan yihiin dhammaan ammaanta ay helaan tan iyo markii ay wax badan sameeyeen si ay nolosha ugu fududeeyaan tababarayaashayada iyo ciyaartooyda.
Boostada blog-ka, waxaan u habayn doonaa wakiilada isboortiga ee ugu mushaharka badan iyo mushaharkooda.
Waa maxay wakiilka isboortiga oo dhan?
Wakiil isboorti ma yahay shaqo ku haboon?
Sidee wakiilada isboortigu lacag u helaan ?.
Intee in le'eg ayay sameeyaan wakiilada isboortiga ?.
Waa maxay Mushaharka Wakiilka Ciyaaraha?
Waa kuwee Wakiilada Ciyaaraha Sare?
Sida Loo Noqdo Wakiilada Isboortiga Ee Ugu Lacagta Badan.
1. Qaado shahaado la xidhiidha berrinka:
2. Hel shahaado xirfadeed oo dheeraad ah:
3. Khibrad warshadeed soo ururi:
4. Sii wad inaad codsato shaqooyin oo aad shaqaalaysiiso. Waa sahal.
20 wakiilada isboortiga ee ugu mushaarka badan adduunka.
1. Scott Boras:
2. Constantin Dumitrascu:
3. Jonathan Barnett:
5. Bawlos Qani:
6. Mino Raiola:
7. Jeff Schwartz:
8. Casey Xir:
9. Jorge Mendes:
10. Tom Condon:
11. Sam iyo Seth Levinson:
12. Joel Wolfe:
13. Dan Lozano:
14. Todd France:
15. Aadam Katz:
16. Austin Brown:
17. Frank Trimboli:
18. Mark Piper:
19. Jeff Berry:
20. Bouna Ndiaye:
5 Su'aalo oo la isweydiiyo oo ku saabsan 20 Wakiilo Ciyaareed oo Lacag Badan
Wakiilka isboortigu waa wakiil sharci oo ka caawiya inuu matalo oo maamulo ciyaartooyda isboortiga iyo tababarayaashooda.
Shaqadooda waxaa ka mid ah:
Shaqaalaysiinta ciyaartoy cusub.
Ka wada xaajoodka qandaraasyada iyo shaqaalaynta.
Saxeexidda heshiisyada oggolaanshaha iyo kafaala -qaadka
Xiriirka dadweynaha; wacyigelinta warbaahinta bulshada.
Taasi waa tilmaanta shaqada oo kale haddii aad i weydiiso.
Dhab ahaantii. Ilaa iyo inta wakiillada isboortigu ay shaqada geliyaan, waxay u badan tahay inay helaan xirfad aad u abaal -marin leh oo dhammaystiran.
Xaddiga lacagta uu wakiilka isboortigu sameeyo waxay ku xiran tahay hadba inta cayaartooygu sameeyo.
Wakiilka isboortigu wuxuu lacag ka sameeyaa qandaraasyada cayaaraha cayaaraha iyo heshiisyada oggolaanshaha kuwaas oo qiyaastii ah 3-4% iyo 10-20% siday u kala horreeyaan.
2016, Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha ayaa shaaca ka qaaday in celceliska wakiilka isboortiga uu sameeyo qiyaastii $89,590 sanadkii taas oo wax yar is bedeshay tan iyo markaas.
Mar labaad, qiimuhu wuu ka duwanaan karaa horyaalada, ciyaartoyda, iyo arrimo kale qaarkood. Tani waxay ka dhigan tahay jawaabta "intee in le'eg ayay sameeyaan wakiilada isboortiga" waxay ku xiran tahay dhowr arrimood.
Halka qaarkood ay sameeyaan wax ka badan shaxanka sare, qaar kalena waxay sameeyaan wax yar ka yar shaxanka la bixiyay.
Mushaharka wakiilka isboortiga waa $ 89, 590 sanadkii, Si kastaba ha ahaatee, tiradan ayaa ku xiran arrimo badan oo kale. Dhab ahaantii, wakiilka isboortiga leh sanado badan ayaa kasban doona wax ka badan hal ka yar.
Shahaadada, tababbarka shakhsi ahaaneed ee ay weheliso awoodaha garashada kale waxay si weyn u saameyn kartaa mushaharka wakiilka isboortiga.
Sida laga soo xigtay Forbes, Scott Brass waa lambarka 1 wakiilka isboortiga. Dhab ahaantii, wuxuu dhawaan ka gorgortamay 3.2 bilyan Boras.
Tani waxay shaki la'aan ka dhigtay inuu noqdo wakiilka ugu sareeya ciyaaraha aduunka. Wakiilada kale ee isboortiga ugu sareeya ee liiskaan waxaa ka mid ah Bryce Hyper, Gerrit Cole, Jonathan Bernett, iwm.
Tani waa dariiqa lagu noqonayo wakiilka isboortiga ugu mushaarka badan.
XIDHIIDHKA: 15 Talooyin si aad Google uga hesho natiijooyinka raadinta ugu fiican
Waxay ku habboonaan lahayd in la helo shahaado la xiriirta isboortiga, sharciga, ganacsiga, ama maaliyadda.
Shakhsi ahaan, waxaan ku talin lahaa in aan shahaado ka qaato maareynta isboortiga maadama koorsooyinka kale ee ganacsi ay ku dhex jiraan.
Warshadaha isboortigu waa tartan iyo in ay ka hormaraan dad badan oo doonaya isla booskaaga, waxaa jira baahi loo qabo in la helo shahaadooyin xirfadeed oo badan si ay kaaga caawiyaan inaad soo baxdo.
Darajooyinkan ka dib, waxaa la filayaa in wakiilada isboortiga ee doonaya in ay tagaan barnaamijyo shaqo barasho halkaas oo ay ku yeelan doonaan waayo-aragnimo gacmeed xagga warshadaha isboortiga.
Waa xikmad in shaqaaluhu isku muujiyo inuu istaahilo si uu awood ugu yeesho fursado badan iyo sii hayn.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan ku dhownahay inaan u dhaqaaqno qaybta ugu qanisan ee qoraalkan baloogga, kaas oo ah in dib loo eego wakiilada isboortiga ee ugu mushaharka badan adduunka.
Amar gaar ah, hoosta waa labaatan ka mid ah.
Scott waxa aan la odhan karin waa wakiilka ciyaaraha ee ugu mushaharka badan aduunka. Tartamayaasha iyo maamulka kooxaha xirfadleyda ayaa aad uga cabsan jiray isaga.
Scott waa garyaqaan haysta qandaraas magaciisa ku kacaya $ 2B. Forbes ayaa Boras u magacowday wakiilka isboortiga ugu qanisan adduunka.
Wuxuu si weyn u maamulaa ciyaartooyda baseball -ka qaarna waa Stephen Strasburg, Chris Davis, Prince Fielder.
Boras wuxuu guddiga ka helaa in ka badan $ 108M sanadkii.
Isagoo tegaya lambarka 2, Dumitrascu wuxuu kasbadaa guddi sannadle ah oo dhan $ 107M.
Qiimaha guud ee qandaraasyada ciyaartoydiisa ayaa in yar ka badan $ 1B taas oo ka badan kala bar waxa Scott Boras sameeyo.
Dumitrascu wuxuu hadda haystaa 87 qandaraas oo macmiil ah si uu u maareeyo kuwaas oo ay ka mid yihiin Douglas Costa, Nemanja Matic, Kante N'Golo, Dimitri Payet, Phillipe Coutinho, iyo Edinson Cavan.
Wuxuu kaloo u shaqeeyaa maamulka isboortiga Mondial.
Barnett waa gudoomiyaha fulinta ICM Stellar sports iyo wakiilka kubada cagta kaasoo maamusha in ka badan 300 oo macaamiil taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah wakiilada ugu sareeya aduunka.
Barnett wuxuu shaabadeeyey ilaa $ 1.4B dhammaan macaamiisheeda wuxuuna kasbaday guddi dhan $ 142.3M.
Qaar ka mid ah macaamiisha uu maamulo waa Saul Niguez iyo Mazi Gomez.
Marka Jay Z uusan sii deynin albamka ama uusan maamulin boqortooyadiisa ganacsi, hal shay oo uu sameeyo ayaa ah inuu maamulo ciyaartoyda.
Jay Z wuxuu maamulaa ilaa 42 ciyaartooy oo ciyaaro kala duwan leh, kuwaas oo qaarkood ay ka mid yihiin Yoenis Cespedes, Kyrie Irving, iyo Robinson Cano.
Isugeynta hantida saafiga ah ayaa lagu qiyaasay inay tahay $ 1B iyada oo $ 28.7M ay tahay guddigiisa inuu noqdo wakiil isboorti.
Isagu waa mid ka mid ah Wakiilada Isboortiga ee ugu Lacagta Badan.
Rich Paul waa aasaasaha wakaaladda isboortiga ee Klutch iyo majors -ka kubbadda koleyga. Qaar ka mid ah ciyaartoydii uu la xaajooday waxaa ka mid ah John Wall, LeBron James, iyo Ben Simmons.
Kuwani waa saddex magac oo keliya saddex iyo labaatan macmiil oo uu Rich Paul ka gorgortamayo.
Bawlos wuxuu ku gorgortamay ilaa $ 1.3B mihnadiisa mihnaddiisa guddiyadiisa oo dhan $ 46M.
Mino Raiola waa wakiilka ciyaaraha kubbadda cagta oo qiimihiisu yahay $ 84M guddiyada wakaaladda.
Xirfadiisa wakiilnimo, Raiola wuxuu gorgortamay ilaa $ 847M.
Qaar ka mid ah macaamiishiisa waxaa ka mid ah Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Paul Pogba iyo Erling Haaland.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Ogaado Naftaada: 15 Hacks Fudud
Raiola hadda wuxuu leeyahay macmiil ku dhawaad ​​77 qof.
Jeff Schwartz waa aasaasaha iyo madaxweynaha maareynta isboortiga ee Excel kaas oo kaalmeeya qandaraasyada qandaraasyada ciyaartooyda kubbadda koleyga.
Sanadihii la soo dhaafay, Jeff wuxuu gorgortamay in ka badan $ 1.8B qandaraasyo wuxuuna sameeyay ilaa $ 73M guddiyada.
Qaar ka mid ah macaamiishiisa waa Kevin Love, Brandon Ingram, Kemba Walker, iyo Nikola Jokic.
Casey Close waxa uu magac u yeeshay inuu ka mid yahay wakiillada ciyaaraha adduunka ee ugu mushaharka badan isagoo $63M ka helay macaash qandaraasyo ah.
Close waa wakiilka kubbadda koleyga waxaana liiska macmiilkiisa ku jira Walker Buehler, Clayton Kershaw, Zack Greinke, iyo Paul Gold Schmidt.
Mendes wuxuu maamulaa ciyaartooyda sida Christiano Ronaldo, James Rodriguez, Jaoa Almeida, Charles Leclerc, Patricia Mamona, iyo Feclenco Morias.
Aad buu u saamayn badan yahay wuxuuna qaataa qiyaastii $ 88M sanadkii.
Qiimaha qandaraaska ciyaartoydiisa ayaa in yar ka badan $ 568M.
2006, Condon waxaa loo magacaabay wakiilka ugu awoodda badan kubbadda cagta Mareykanka wararka isboortiga.
Ciyaartoyda uu la xaajoodo waa JJ Watt, Calais Campbell, Peyton Manning, AJ Green, Luke Keuchly, iyo Richard Sherman.
Qiimaha qandaraaska ciyaartoydiisa waa qiyaastii $ 494M halka Condon uu sanadkii qaato $ 80M.
Sam iyo Seth waa walaalo ACES Inc, oo ah shirkad baseball ah.
Kuwo badan ayaa sheegaya in guushooda loo aanayn karo xaqiiqda ah inay koox yihiin laakiin waxa dad badani aanay garanayn ayaa ah, shaqsi ahaan, nimankani sidoo kale waxay sameeyeen waxyaabo cajiib ah.
Mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu maamulaa ilaa 60 macmiil oo qaarkood ay ka mid yihiin David Wright, Scott Rolen, Allen Craig, iyo kuwo kale. Qandaraas ka badan $ 500M ayaa la saxiixay iyadoo ay ilaalinayaan walaalahan.
Wadarta dakhliga ka soo gala komishanka mid kasta oo ka mid ahi waa qiyaastii $ 67M.
Wolfe waxa uu isu taagay mid ka mid ah wakiilada ugu awooda badan taariikhda aduunka isaga oo kala xaajooday mid ka mid ah heshiisyadii ugu waaweynaa taariikhda, Giancarlo Stanton oo 13 sano ah oo $325 milyan ah kula galay Miami Marlins.
Isku soo wada duuboo, Wolfe wuxuu xirmay heshiisyo $ 1B ah oo xirfadiisa ku aaddan 47 macmiil. Wolfe waxay u gorgortantaa macaamiisha sida Yu Danish iyo Nolan Arenado waxayna kasbatay $ 52M guddi ahaan.
Lozano waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu dahsoon ganacsiga oo leh saldhig 24-nin-macmiil iyo qandaraas qiimihiisu yahay $ 895.3M.
Heshiisyadan ayaa kasbaday lacag dhan $ 44.2M. Wakiilkan baseball wuxuu la xiriiraa kooxda isboortiga MVP macaamiisha sida Manny Machado, Albert Pujols, iyo Joey Votto.
Todd waa wakiilka ciyaaraha kubbadda cagta ee macaamiisha sida Grady Jarett, Fletcher Cox, iyo Aaron Donald.
Wuxuu gorgortamay ilaa $ 1.5B heshiisyo wuxuuna leeyahay guddi dhan $ 44M magaciisa.
15. Adam Katz:
Katz waa wakiilka kubbadda koleyga oo hadda macmiil ku leh 41 xiddigood oo isboorti oo ay ku jiraan Kenley Jansen, Jeff Samardzija, iyo Yasmani Grandal.
Sanadihii la soo dhaafay, Katz wuxuu awooday inuu dalbado qandaraasyo qiimihiisu yahay $ 450M iyada oo $ 23M ay tahay dakhligii guddigiisa.
Austin Brown waa madaxa isku xirka qeybta kubbadda koleyga ee CAA, asaga oo asal ku leh ganacsiga iyo sharciga.
Dakhligiisa wakiil isboorti wuxuu ku dhow yahay $ 26M oo qandaraaskiisu yahay $ 657M iyo gorgortan $ 2.6B ah oo ku saabsan heshiisyada wakiilka xorta ah.
XIDHIIDHKA: Sida Loo tirtiro Barnaamijyada Chromebook | Tilmaan-Talaabo Talaabo-Fudud oo Fudud
Qaar ka mid ah macaamiisheeda waxaa ka mid ah D'Angelo Russell, Zion Williamson, iyo Karl-Anthony Towns.
Frank Trimboli waa aasaasaha aasaaska Kubadda Cagta ka hor inta aysan CCA iibsan 2019. Xirfadda Trimboli ee wakiilka isboortiga kubbadda cagta waxay kasbatay ku dhawaad ​​$ 29M iyada oo in ka badan $ 296M wada xaajoodyo.
Wuxuu wakiil ka yahay macaamiisha 450 oo qaarkoodna ay ka mid yihiin Dele Alli, James Maddison, Kyle Walker, Son Heung-Min, iyo Raphael Varane.
Mark Pieper waa mid ka mid ah wakiillada baseball -ka ugu caansan waxaana si weyn loogu yaqaannaa wax -ku -biirinta wakaaladda Madaxa -bannaan ee Ciyaaraha iyo Madadaalada.
Sanadihii la soo dhaafay, Pieper wuxuu u gorgortamay 65 macmiil oo qandaraaskiisu yahay $ 462M iyo $ 32M oo ah dakhliga guddiga.
Qaar ka mid ah macaamiisheeda waxaa ka mid ah Patrick Corbin, Jordan Zimmermann, iyo Justin Verlander.
Jeff waa madaxa wakiilka kubbadda koleyga ee CAA wuxuuna ka wada xaajooday heshiisyo diiwaangelin ah oo qiimihiisu yahay $ 607M macaamiisha sida Jacob deGrom, Will Myers, iyo Buster Posey.
Wuxuu kasbaday qiyaastii $ 36M heshiisyadan qandaraaska.
Ndiaye waa wakiil kubbadda koleyga Faransiiska ah oo ka hor yimid dhammaan khilaafyada. Xirfadiisa wakiilnimo waxay caddaynaysaa in qofku yeelan karo saldhig macmiil oo aad u yar oo aad u weyn isla markaana wali ku weyn ganacsigan.
Ndiaye wuxuu leeyahay 7 macmiil oo kaliya laakiin wuxuu gorgortamay in ka badan $ 400M qandaraasyo.
Macaamiishiisa waxaa ka mid ah Evan Fournier, Rudy Gobert, iyo Nicola Batum.
Wuxuu kasbaday $ 16M ilaa hadda. Intaa waxaa dheer, isagu waa mid ka mid ah Wakiilada Isboortiga ee Lacag -bixinta ugu sarreeya.
Wakiilada ciyaaraha ma khamaari karaan?.
Waa xirfad -darro in wakiillada NBA/NFL ay ku khamaaraan cayaartooda. Maadaama inta badan wakiiladu rabaan inay ilaashadaan sumcadooda guud oo ay sugaan macaamiil badan, waa dhif in la helo iyagoo sidaas samaynaya.
Waa imisa boqolkiiba wakiilada isboortigu waa qareeno?
Dhammaan wakiillada isboortigu ma aha qareenno, sidoo kale uma baahnid shahaadada sharciga si aad u noqoto wakiil isboorti.
Si kastaba ha noqotee, wakiilo badan ayaa qareeno u ah maadaama ay badbaadinayso cayaartooy culeyska ah in la qabsado qareen si dib loogu eego shuruudaha heshiiska iyo sidoo kale wakiil isboorti si kor loogu qaado xirfaddooda.
Waa kuwee wakiilada isboortiga ee ugu sarreeya oo aan haysan shahaado sharci?
- Walaalaha Hendrick.
- Chris Weinke
- Grange Cas
Sidee wakiilada isboortiga loo nidaamiyaa ?.
Sannadkii 2006, xeerka wakiillada ciyaartooyda labbiska (UAAA) waxaa abuuray shirweynihii qaran ee guddiyada ee ku saabsanaa shuruucda gobolka ee labisan.
Tan waxaa loo abuuray si ay u siiso heer qaran wakiilada isboortiga iyo isdhexgalka ardayga iyo ciyaartooyga kaas oo gobol kastaa uu dooran karo inuu dejiyo.
Xeerkan ayaa wax laga beddelay sannado badan.
Waa maxay anshaxa wakiilada isboortiga ?.
Wakiilka isboortiga waxaa laga filayaa inuu run iyo daacad ka yahay macaamilka uu la yeelanayo macaamiisha laakiin nasiib darro, sidaas ma aha mar walba maadaama ay jiraan wakiillo u oggolaaday damac inay qabsadaan.
Maqaalkani waxa uu sharaxay Wakiilada Isboortiga ee ugu mushaharka badan.
Kuwa kore keebaa ka xiiso badan, jeegaga mushaharka ama mawduuca gacanta? Si naxariis leh iigu soo sheeg qaybta faallooyinka ee hoose waxaana noqon doona kan ugu faraxsan akhrinta fikradahaaga.
Waa maxay Shahaadada Cashuurtu? Qeexid, dulmar, iyo sida ay u shaqeyso
La imaatinka fikrad ganacsi waa hal talaabo. Barashada sida meheradda looga bilaabo eber waa…
20-ka Taxanaha Anime ee ugu Fiican 2022 Waqti kasta iyo sida aad u daawan karto
Taxanaha anime-ka ugu wanagsan ee mar walba waa madadaalo, waxbarid, fahan badan, habaysan, oo soo jiidata daawadayaasha ka kala yimid daafaha dunida
Sida loo cusboonaysiiyo Apps-ka iPhone | Samee tan waqti yar gudahood
Ku-ilaalinta apps-ka iPhone-kaaga muhiim maahan sababo ammaan dartood laakiin aawadood…
Top 10 Kulliyadood oo leh Qalinjabinta ugu Mushaharka badan Dunida | 2022
Inta badan codsadayaasha Kulliyadaha ee ku baahsan dalka Mareykanka, hal arrin oo dhiirigelineysa doorashada kulliyadda…